Sakanan’ny fitsarana Sri Lankey vonjimaika ho tsy mahazo miditra ny biraony ny praiminisitra Rajapaksa · Global Voices teny Malagasy
Sakanan'ny fitsarana Sri Lankey vonjimaika ho tsy mahazo miditra ny biraony ny praiminisitra Rajapaksa
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, Français, English
Sary avy amin'ny pejy Facebook an'i Groundviews. Nampiasaina avy amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Niditra dingana vaovao ny adim-pahefana eo amin'ny praiminisitra voaongana Wickremesinghe sy ny praiminisitra vao notendrena Rajapaksa. Tamin'ny 3 Desambra 2018, namoaka didy vonjimaika manery an'i Rajapaska tsy ho ao amin'ny birao maha-praiminisitra azy ny Fitsarana Ambony Sri Lankey, mandra-pandrenesana ny fanangonan-tsonia mihaika ny fanendrena azy.
Nankany amin'ny fitsarana ny praiminisitra voaongana Ranil Wickremasinghe sy parlemantera hafa miisa 121 tamin'ny volana lasa hitady taratasy ara-pitsarana Quo Warranto izay mitaky amin'i Rajapaksa hampiseho hoe fahefana inona no nanome alalana azy hiasa ao amin'ny biraon'ny praiminisitra. Nanambara ry zareo fa tsy manana fahefana hitazona ny birao i Mahinda Rajapaksa na dia eo aza ny zava-misy nitsipahan'ny filoha Maithripala Sirisena indroa miantoana ny fitsipaham-pitokisana an'i Rajapaksa.
Namoaka didy vonjimaika ny Fitsarana Ambony manery ny PM Mahinda Rajapaksa sy ny kabinetrany tsy hiasa mandra-pandrenesana ny fanangonan-tsonia. Nivoaka ihany koa ny fanamarihana ho an'ny 49 mpikambana ao amin'ny kabinetra, ary tafiditra amin'izany ny PM hiseho eo anoloan'ny fitsarana amin'ny 12 des mba hohenoina amin'ilay fanangonan-tsonia.
Srilanka: Kely kokoa ny mety ho fahapotehana vokatry ny fanerena kabinetra iray ara-dalàna tsy hiasa amin'ny lafiny rehetra miohatra amin'ny fahapotehana ateraky ny famelana andian'olona tsy manana ny fahefana araka ny lalàna hiasa ho PM/minisitra, hoy ny mpitsara Surasena
Maro tamin'ireo Sri Lankey no faly tamin'izany didim-pitsarana izany:
Andray izany fahasamihafana hita amin'ny firenena iray rehefa miasa ny fitsarana, ary mahomby izy ireny Fandresena lehibe indrindra noho ny #CoupLK ary raha mijoro tsara hatramin'ny farany ry zareo, mihevitra aho fa mendrika ity tolona sy ity fanonganam-panjakana ity izany. Mitondra mankany amin'ny tsara kokoa ontsana/mihotakotaka sasany.
Nahitana rafi-pitsarana velona tsara – tsy tany amin'ireo fitsarana ambony ihany fa any amin'ireo fitsarana ambaratonga voalohany koa – ny amin'ny amin'ny lalàm-bahoaka sy ny adiheloka bevava tao anatin'ny herinandro maromaro izao. Fotoana mampirehareha izany ho an'ireo rehetra manome lanja ny Fampanjakana ny Lalàna sy ny fahaleovantenan'ny rafi-pitsarana eto amin'ny firenentsika.
Nisioka i Rajapaksa fa eny am-pandehanana ho any amin'ny fitsarana tampony izy hihaika ny didim-pitsarana. Tao amin'ny fanambaràna iray hafa, niantso ihany koa izy ny hanaovana fitsarana alohan'ny fotoana ho kianja ifanandrinana, matoky ny herijikany izy satria noraofiny ny fandresena tamin'ny fifidianam-paritra tamin'ny febroary 2018.
Tsy mitovy hevitra amin'ny didin'ny fatsarana ambony izahay satria ny fitsarana tampony ihany no manapaka amin'ny resaka lalampanorenana. Hangataka fitsarana ambony (kokoa) izahay rahampitso
Nihiaka i Patali Champika Ranawaka, Minisitry ny Megapolis sy ny Fampandrosoana Tandrefana taloha tao Sri Lanka, raha nandre ny antsoin'i Rajapaksa hampanao fifidianana:
Tsy mila mamoaka fanambaràna sy mangataka ny hanaovana fifidianana ankapobeny tahaka izany i Mahinda Rajapaksa hamahàna ity krizy ity, izay ry zareo ihany no namboly izany. Mialà fotsiny amin'ny fitarihana tsy ara-dalàna entinao! asa dimy minitra izany!
Raha mbola mandeha moa ny fizotram-pitsarana hanapahan-kevitra amin'izay hitazona any amin'ny farany ny toeran'ny PM, dia mbola manao fihetsikeseham-panoherana kosa ny olom-pirenena:
Mitsangàna ry Negombo miresaka amin'ny vondrona seminarista tanora mbola latsaky ny 20 taona avokoa izahay. Nanontany azy ireo izahay hoe maninona ry zareo no tonga. Dia valinteny tokana ihany no ananan-dry zareo – “Noho ny fitiavanay ny tanindrazanay”.
Sary mampisy aingam-panahy avy amin'ny fihetsiketsehan'ny olom-pirenena avy eto Srilanka raha mbola mifahatra amin'ny fanoherana ny fandrombaham-pahefana tsy ara-dalàmpanorenana nataon'i Rajapaska ny firaisamonim-pirenena.
Vehivavy manao diabe anaty orana, mamelatra ny lamba hoany ho fametrahana sora-baventy ahitana tarigetra demaokratika
Raisin'i Rohan Samarajiva ho fifandonan'ny mpanaja lalampanorenana sy ny mpanandratra ny fanjakan'andriana ity krizy ao Sri Lanka ity. Ao amin'ny bilaogy izy manoratra:
Hita ho nahavita ny fihazakazahany ireo sangany miray dia amin'ny fanandratana ny lalampanorenana, enimpolo taona taty aorian'ny fahaleovantena. Miverina mankany amin'ny fanjakan'andriana niandohantsika isika, tsy ireo fianakaviana mpitondra ihany fa ny sarambabem-bahoaka amin'ny ankapobeny, tafiditra amin'izany ireo mpitari-kevitra sy manampahaizana.
Sarmini Serasinghe miantso ny Sri Lankey rehetra hitsangana raha tsy te-ho tara loatra.
Tonga ny fotoana ho an'ny olompirenena tsirairay eto Sri Lanka, tsy ijerena sata ara-tsosialy na arak'asa, hitsangana ao anaty fitoniana sy hiaro ny andrim-panjakana masin'ny demaokrasia eto amin'ny firenentsika raha tsy te-ho tara loatra. Zo sy adidintsika amin'ny maha-olompirenena izany
Mandritra izany fotoana izany, efa manomboka mipoitra ny fanontaniana ara-pratika — toy ny hoe ahoana ny ilazana an'i Rajapaksa:
Ity lahatsoratra ity manondro ny fitateram-baovao amin'ny teny Sinhala, Tamil ary Anglisy tamin'ny 01-03 desambra manondro ny toerana tazonin'i Mahinda Rajapaksa. Gazety maro no manondro an'i Rajapaksa ho praiminisitra. Ahoana ny eritreritrao?
Rehefa nandany ny NCM ny parlemanta tamin'ny 14 novambra, namoaka fanambarana ofisialy ny mpitondrateny fa lany ny fitsipaham-pitokisana ary foana ny kabinetra. Mbola mety amin'ny gazety ve ny manondro an'i Rajapaksa ho PM?